SAADAAL: Everton 2-1 Spurs, Leeds 1-2 Liverpool & Man United 2-1 Burnley - Saadaasha Sky Sports Ee Kulamada Premier League ee Toddobaadkan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaSAADAAL: Everton 2-1 Spurs, Leeds 1-2 Liverpool & Man United 2-1 Burnley – Saadaasha Sky Sports Ee Kulamada Premier League ee Toddobaadkan
SAADAAL: Everton 2-1 Spurs, Leeds 1-2 Liverpool & Man United 2-1 Burnley – Saadaasha Sky Sports Ee Kulamada Premier League ee Toddobaadkan
Sky Sports ayaa soo saaray saadaasha kulamada horyaalka Premier League ee toddobaadkan, iyadoo ay inta badan ciyaarayaan qaar ka mid ah kooxaha dagaalku ku dhexmarayo kaalmaha saddexaad illaa afraad, hase yeeshee waxa iyaguna fasax ah kooxo dheelaya semi-finalka FA Cup.
Chelsea iyo Manchester City ayaa Sabtida ku kala baxaya semi-finalka FA Cup, waxaanay taasi ka dhigan tahay in booska Blues ay kaga jirto horyaalka ay sii weydo oo ay koox kale ugu sii fadhiisato si ku-meelgaadh ah, halka Leicester City oo saddexaad ah ku jirta ay iyaduna si la mid ah Chelsea oo kale booskeeda u waayi karto maadaama ay la ciyaarayso Southampton semi-finalka FA Cup.
West Ham United ayaa usbuucan xaqiijisan karta in ay soo gasho kaalinta saddexaad ee horyaalka, isla markaana ay laba dhibcood ka sare marto Leicester City, halka Liverpool ay iyaduna booska shanaad ka cidhiidhsan karto Chelsea, isla markaana ay xataa West Ham ka tuuri karto afraad haddii kooxda reer London laga badiyo.
Tottenham oo kaalinta toddobaad ku jirta, laba dhibcoodna ka hoosaysa Liverpool ayaa marti u noqonaysa Everton oo dhibic kaliya ka hoosaysa, waxaana isku-dhacooda oo Jimcaha la ciyaarayo uu yahay mid xiise gaar ah leh oo ay iska hor imanayaan macallimiinta caanka ah ee Carlo Ancelotti iyo Jose Mourinho.
Telefishanka Sky Sports ayaa saadaaliyey shan kulan oo usbuucan dhacaya oo horyaalka Premier League ah, waxaana khabiirkooda xilli ciyaareedkan saadaasha u sameeya ee Jones Knows uu Carlo Ancelotti ugu bushaareeyey in uu gacanta sare ka yeelan doono Jose Mourinho oo uu horena uga reebay FA Cup.
Waxa kale oo uu Knows guulo u saadaaliyey labada kooxood ee Manchester United iyo Liverpool.
Halkan kaga bogo saadaasha Sky Sports ee kulamada Premier League ee toddobaadkan: